Sabotsy 07 Septambra 2019 – FJKM
Sabotsy 07 Septambra 2019
2 Korintiana 3.1-18
Misy fahamarinana efatra ambaran’ny Soratra masina eto manoloana ny asam-pamonjena nataon’i Kristy ho an’ny mino.
1-Epistilin’ny mino (and1-3)
« Eny, aseho ho epistilin’ i Kristy, izay entinay ianareo » (3.3). Ny tenan’ny mino dia epistily velona vakin’ny olona . Tandremo fa eo aminao kristiana no itarafan’ny olona , izany hoe : fiainana ao amin’i Kristy izany , sao dia avy amin’ny ataonao no hisakana ny hafa tsy hanatona ny Tompo (Lio 11.52/Mat 23.13/ 1Kor 10.32).
2-Manana ny fahafahan’ Andriamanitra (and 4-5)
Avy amin’ny Tompo irery ihany ny fahafahana ananan’ny mino (and 5). Ilay fahafaha-manao araka fahefan’ Andriamanitra no ambara eto. Marina ny hoe: « ny zavatra rehetra hain’ny mino » (Mar 9.23) . Tandremana anefa izany sao mampirehareha (Gal 5.13).
3-Mpanompon’ny fanekena vaovao(and 6)
Jesoa Kristy Ilay fanekena vaovaon’ Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao , izay tonga velona ao am-pon’ny olona izay mino Azy fa tsy tahaka ny lalàna ivelany . Voasoratra ao am-po fa tsy amin’ny vato fisaka . Isika no mijoro ho vavolombelon’izany .
4-Manana ny tombom-boninahitry ny fanompoana (and7-18)
Afaka ny sakana rehetra eo aminao sy izay manafina ny fanatrehanao amin’ Andriamanitra . Efa vitan’i Jesoa ny fandravana ny sakana rehetra hanatonanana ny Tompo (Mat 27.51 / Heb 1.3 /Kol 1.20 /Efe 2.14-18 /Rom 5.2)